आईओएस iPhone आईफोन on मा ढिलो? यो चाल प्रयास गर्नुहोस् आईफोन समाचार
आईओएस iPhone आईफोन on मा ढिलो? यो चाल प्रयोग गर्नुहोस्
धेरै प्रयोगकर्ताहरू जोसँग एक छ आईफोन4तिनीहरू टर्मिनलको लागि आईओएस of को पहिलो संस्करणको प्रदर्शनसँग धेरै निराश छन्।
सबैभन्दा स्पष्ट समस्या भर्चुअल किबोर्डमा निहित छ जुन स्क्रिनमा देखा पर्दछ यसको प्रतिक्रिया समय to देखि १ seconds सेकेन्ड सम्म हुन्छ सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा। यसले सबै अनुप्रयोगहरूलाई असर गर्छ जसमा तपाईले लेख्नुपर्दछ (जुन थोरै छैनन्), त्यसकारण, एप्पलले यस समस्यामा ध्यान दिन ध्यान दिनु पर्दछ जतिसक्दो चाँडो यसलाई समाधान गर्न।
जब हामी यो अपडेट आउन पर्खिरहेका छौं, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यो प्रमाणित गर्न सक्षम भएका छन् कि भर्चुअल किबोर्ड प्रतिक्रिया समस्या एक साधारण चालको साथ समाधान गरिएको छ। तपाईले सेटिंग्स मेनूमा जानु पर्छ, आईक्लाउड सेक्सन पहुँच गर्नुहोस् र "कागजात र डेटा" विकल्प असक्षम गर्नुहोस्।
मानिस जसले यो विधि प्रयोग गरीसकेका छन उनी नतिजा संग धेरै खुसी छिन् तपाईको आईफोन अनावश्यक टर्मिनल हुनबाट सामान्य रूपमा काम गरिरहेको छ। यो स्पष्ट छ कि गल्ती आईफोन but होइन तर आईओएस but हो तर हे, हामी यसको जीवनको प्रारम्भिक चरणमा छौं र यो असफल छ कि आउँदो हप्ताहरूमा अदृश्य हुने कुरा सामान्य छ।
अझै, दिमागमा राख्नुहोस् कि आईफोन। यो पुरानो टर्मिनल हो जुन आईओएस install स्थापना गर्न सक्दछ र, त्यसकारण यसको हार्डवेयर प्रणालीलाई समान फ्ल्युडिटीमा सार्नका लागि पर्याप्त सीमित छ जुन यसले पछिल्ला संस्करणहरूमा प्रस्ताव गर्दछ। यो एप्पललाई थाहा छ र त्यसैले आईओएस many का धेरै प्रकारका कार्यहरू यस मोडेलमा निष्क्रिय गर्नुपर्‍यो, एक मूल्य जुन भुक्तान गरिनुपर्दछ जुन अपडेटहरूको एक बर्षको मजा लिन सक्षम हुनुपर्दछ।
थप जानकारी - iWork, iMovie र iPhoto नि: शुल्क, यसमा कुञ्जीहरू डाउनलोड नगरी कसरी डाउनलोड गर्ने
मुहान - सफ्टपीडिया
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» आईओएस iPhone आईफोन on मा ढिलो? यो चाल प्रयोग गर्नुहोस्
आईओएस on मा मेरो आईफोन restored मा पुनःस्थापित र नयाँको रूपमा कन्फिगर गरिएको, यो राम्रोसँग जान्छ, जस्तो आईओएस 7. जस्तै। म ती मानिसहरूलाई बुझ्दिन जो यो घातक हो भन्छन्।
मेरो यो गलत हो, /: कहानी माथि वर्णन गरिए जस्तो छ
मेरो विभाजन भएको छ, रिलमा आन्दोलन एकदम ढिलो छ, कहिलेकाँही यति बिस्तारै सार्दछ कि स्क्रोलिंगको सट्टा फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं रिलमा फर्कनु पर्छ, ठीक छ, मेरो आईफोन is हो, म to मा जानुपर्दछ। तर किन एप्पलले कम्प्युटरमा अपडेट पठाउँदछ जसले यसलाई समर्थन गर्दैन? हामीलाई जबरजस्ती उपकरण फ्याक्न लगाउन ??
अवांछनीय? त्यो एक्लो पहिल्यै अवांछनीय हो? कस्तो कुरा! अब यो किबोर्डको कारण वा अन्य मान्छेको लेख जस्तो कि आईफोन already लाई पहिले नै अवमूल्यन गरिएको छ, तिनीहरू अज्ञात छन्।
अवांछनीयलाई जवाफ दिनुहोस्
यो अवांछनीय हुन सक्छ यदि एक वाक्य लेख्नको लागि एक मिनेट लाग्छ जहाँ त्यहाँ केवल १२ वर्णहरू छन्। यो एक असफलता हो जस्तो देखिन्छ कि स्यापलाई ती हुन असम्भव छ।
मसँग आईफोन have छ र मैले मात्र देखेको छु कि सुस्त गतिमा जान्छ अनुस्मारकहरू अनुप्रयोग हुन्। छिटो काम गर्न सक्षम हुन घातक। मैले क्यालेन्डर install स्थापना गर्नुपर्‍यो जुन मेरो लागि एकदम राम्रो काम गर्दछ।
Drevil लाई जवाफ दिनुहोस्
0 भर्लिंक भन्यो
मसँग आईपड टच G जी (आईओएस)) मा ढिलो कुञ्जीपाटीसँग ठीक यस्तै समस्या छ तर मसँग विकल्प छ जुन उनीहरू आफैंमा असक्षम आईक्लाउन्डको बारेमा भन्छन्, म कसरी यसलाई समाधान गर्ने? के यो विपरित हुन सक्छ र वास्तवमा यसलाई सक्रिय बनाउँछ? कृपया सहयोग गर्नुहोस्!
0verlink लाई जवाफ दिनुहोस्
सज्जनहरू, यदि यो ढिलो भयो भने, पुनःस्थापना गर्नुहोस् र नयाँ आईफोनको रूपमा सेट अप गर्नुहोस्। यसले लगभग सबै समस्याहरू समाधान गर्दछ। मैले यो मेरो आईफोन on मा २ पटक गरेँ र यो सहजै जान्छ
Hbs लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि मैले नयाँ आईफोनको रूपमा सेट गरेको छु भने म iCloud बाट सम्पर्कहरू सजिलै डाउनलोड गर्न सक्दछु?
नोटरीलाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईंले आईफोन do बाट यो गर्नुपर्ने थियो? ?? मैले सोचे कि त्यो समस्या मात्र हामीसँग आईफोन आईफोन5मा छ र नयाँ छैन
के कसैलाई थाहा छ किन मैले "सूचना केन्द्र" मा सूचनाहरु पाउँदिन ??? मैले सूचना केन्द्र व्हाट्सएप, सन्देशहरू, मेल, ... सक्रिय पारें, र मैले यो प्राप्त गरेन, आईफोन,, धन्यबाद।
आज मलाई लाइनसँगै त्यस्तै भयो। मैले हिजो आईओएस7मा अपग्रेड गर्‍यो, र यो दिउँसो महसुस भयो कि लाइन सूचनाहरू ममा पुगेको छैन। जे होस्, यो लाईन खोल्न गरिएको छ (मैले यसलाई अपडेटको अघिदेखि खोलेको छैन) र मैले सन्देशहरू प्राप्त गरेको छु। तब मलाई पठाउन भनियो, मैले मल्टिटास्किंगबाट लाइन बन्द गरें र आईफोन लक गरें, र सूचनाहरू ममा आइपुगे। अब यदि यसले तपाईलाई सबै चीजमा विफल पार्छ भने अर्को समस्या पनि हुन सक्छ
मसँग ss छ र SETTINGS प्रवेश गर्न ढिलो छ, र सेटि withinहरू भित्र कुनै पनि विकल्पहरू प्रविष्ट गर्न यो ढिलो छ, म पहिले नै पूर्वावस्थामा ल्याउने र नयाँको रूपमा कन्फिगर गर्ने प्रयास गर्छु तर यो नै रहन्छः S
जुआनआरलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते जुआन, म तपाईं जस्तै स्थितिमा छु। आईफोन S एस रिस्टोर गर्नुहोस् र मैले तपाईंलाई परिवर्तन गरेको याद गरेन। म निरास छु
: हो, म निराश छु, किन मैले त्यसो गरेन किनभने मैले फोनलाई स्क्र्याचबाट पुनःस्थापना गरेमा त्यसो भयो। सबैभन्दा खराब कुरा यो हो कि मलाई कसैले मद्दत गर्न कसैलाई पाउँदैन, तपाईं पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई मैले पढें कि यो पनि उसलाई हुन्छ
ठिक छ, यो मलाई पूर्ण सूट गर्दछ
हिजो मैले मेरो आईफोन updated लाई आइट्युन प्रयोग गरेर अपडेट गरें (मैले अपडेट गरेँ, मैले पुनर्स्थापना गरिनँ, कि मसँग पहिले नै भएको हरेक चीजसँगै), र मैले कुञ्जीपाटीमा कुनै ढिलोपन देखेको छैन वा कुनै समस्या भएको छ। यो सत्य हो कि यसले आईओएस than भन्दा थोरै कम तरलता चलाउँछ, तर आईफोन with जी र आईओएस update लाई यसको अपडेटसँग भएको तुलनामा यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन र मलाई विश्वास गर्दछ, यो महिमा हो।
केही अनुप्रयोगहरू मेरो लागि धेरै ढिलो छ वा तिनीहरू सरल रूपमा खोल्दैनन्, उदाहरणका लागि मसँग फिंग छ र यो खोल्दैन, मसँग व्हाट्सएप छ र यो ढिलो र अनाड़ी हो, मसँग स्पेनमा पहिलो आईफोन4१g जीबी छ, नयाँको रूपमा पुनर्स्थापना गरियो। , अभिवादन।
धन्यबाद, यस चालले मेरो लागि काम गर्‍यो ... मेरो आईफोन कीबोर्ड एकदम सुस्त थियो, मैले लेखें र यो सबै चीज पछि seconds सेकेन्ड पछि देखा पर्‍यो !!!
तर अब यो समाधान भयो ... धन्यवाद!
Pauly लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई पनि त्यस्तै भयो
Yiyi लाई जवाफ दिनुहोस्
ऊ एकदम ढिलो हिंड्छ ...
यो अधिक ध्यान दिएर हुन्छ जब तपाईले आईफोन s एस प्रयोग गर्नु भएको छ (सबै व्यक्तिको लागि जुन यो आश्वासन छ कि निश्चित छ)
Jaime लाई जवाफ दिनुहोस्।
धन्यवाद!! तपाईंको सल्लाहले मलाई धेरै मद्दत गर्‍यो किनकि म धेरै निराश र निराश थिएँ
मसँग यो समस्या आएको छ, अब यस सरल 'ट्रिक' को साथ समाधान!
एप्पल एक धेरै आक्रामक अप्रचलित नीति छ, र प्रोग्राम। तिनीहरूका सबै उपकरणहरू चाँडै नै एक तरीकाले वा अर्कोमा उपयोगी हुनको लागि रोक्दछ, जब तिनीहरूसँग अझै प्रयोगको चरण छ। यसले तिनीहरूलाई त्यस्तो अवस्थामा छोड्दैन जहाँ तपाईं उनीहरूसँग जे गर्न सक्नुहुन्छ, होइन, तिनीहरू भारी र बेकारमा अन्त हुन्छन् ताकि तपाईं नयाँ खरीद गर्न बाध्य हुनुभयो। किन यो तपाइँको टर्मिनलमा काम गर्ने अनुप्रयोगहरूको भर्खरको संस्करण राख्ने सम्भावना हटाउँदछ, र तिनीहरूलाई अद्यावधिक गर्दछ यदि तपाईलाई बताउनुपर्दछ कि तपाइँ आफ्नो ios को साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न?
सावधान रहनुहोस्, म १ for बर्ष मात्र एक एप्पल प्रयोगकर्ता भएको छु।
मैले एउटा समाधान फेला पारे, वास्तवमा मलाई लाग्छ कि यो उत्तम आईलोन हो जुन आईफोन with मार्फत गर्न सकिन्छ, जुन यसलाई जतिसक्दो चाँडो बेच्न र टर्मिनल नवीकरण गर्नु बाहेक अरू कुनै आईफोन iPhone एस वा कुनै पनि प्रतिस्पर्धा हो। जुन हालको आवश्यकताहरूसँग सन्तुष्ट हुन्छ जुन सभ्य तरिकामा व्हाट्सएप खोल्न सक्षम हुनु बाहेक अरु कुनै होइन, क्र्यास वा लगहरू, आदि बिना नै खोल्न वा बन्द अनुप्रयोगहरू। किनभने ती सबै मुद्दाहरू जसको लागि समाधान प्रस्ताव गरिएको छ, किनकि तिनीहरू आईओएस .4.०.१ वा अनौंठा दूधको साथ निश्चित हुँदैनन्। एप्पलले चाहेको आईफोन of लाई जति सक्दो चाँडो हटाउन चाहन्छ, तपाईंले केवल यो देख्नुपर्दछ कि यसले टर्मिनललाई अझ १ दुखद वर्षको लागि समर्थन दिनेछ।
त्यसोभए, समाधान, त्यसपछि यसलाई बेच्नुहोस् र जबरजस्ती लगानी खर्चको केही अंश पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्। यस भन्दा पहिले राम्रो, किनभने अर्को वर्ष यसको लागी कम खर्च हुनेछ र यदि होइन भने तपाइँ यसलाई देख्नुहुनेछ।
Leish लाई जवाफ दिनुहोस्
सहयोग मा बधाई छ। अब यो काम गर्दछ।
Juanmamo लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद!!!!!!!!!! मेरो किबोर्डले प्रति शब्द १ seconds सेकेन्ड लियो, जानकारीका लागि साँच्चिकै धन्यबाद, २ दिन त्यो हुँदै गयो घातक थियो !!!
डेभिड साल्गुएरो भन्यो
मसँग आईफोन4छ र अपडेटको साथमा म निराश छु, तर यो ट्रिकको साथ यो मेरो लागि पूर्ण रूपमा काम गर्दछ।
डेभिड साल्गुएरोलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो आईफोन slow ढिलो छ र रिंगरको आवाज आईओएस with को साथ घटेको छ, कस्तो निराशा 🙁
तपाईंहरू जसको आईफोन have छ उसले आईओएस to मा जानको लागि सोच्दैन पनि, व्यावहारिक रूपमा तपाईको आईफोन चार्ज गर्नुहुन्छ र पछाडि फर्कने कुनै उपाय छैन ... एप्पल शिट जानुहोस् ... उनीहरूले हामीलाई आईफोनको मूल्यवान्‌ कसरी गर्न सक्छन् ?? ? पागल मँ फेरि एप्पलबाट केहि पनि किन्न छैन जब सम्म तिनीहरूले यसलाई हल गर्दैनन्, यसको लायक छ के साथ यो एक घोटाला हो।
Jvc55555 लाई जवाफ दिनुहोस्।
म आईओएस .5.1.१ बाट आईओएस .7.04.०XNUMX मा गईरहेको छु र म अत्यन्तै खुसी छु, यसको सिफारिस गर्दछु, यस समयमा मैले जेलभ्रेट गरेन र ब्याट्री मैले लामो सिफारिश गरेको भन्दा लामो समय सम्म चलेको थियो। तपाईंहरू जो गलत गर्दै हुनुहुन्छ, के तपाईंले यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुभयो र ब्याकअप पुन: प्राप्ति गर्नुभयो?
सेबास्टियन एगुइरे भन्यो
दुर्भाग्यवश, एप्पल उपकरण धेरै बर्ष पहिलेको उच्च प्रदर्शन मेशिनहरू बन्न रोकिरहेको छ, आज कम्पनी घर वा फुर्सत प्रयोगका लागि बालबालिका वा किशोर दर्शकहरू र गृहिनीहरू (कसैलाई कम महत्त्व नगरी) ध्यान केन्द्रित गर्ने उपकरणहरू उत्पादन गर्न उन्मुख छ। जे होस्, उसले अझै पनि "उच्च उत्पादकत्व" को छवि बेच्न जारी राख्दछ, हामी सबैलाई बेवकूफ बनाउने जसले हामीसँग काम गर्न सक्षम टोली छ भनी विश्वास गर्छ।
यस अर्थमा यो कसरी सम्भव छ कि उही बर्षको सामसु। र त्यस्तै अनुप्रयोगहरू सहित मेरो आईफोन than भन्दा धेरै छिटो छ र कसरी मकबुकaडी मोडेलमा अडिनु सक्छ जुन नम्र पीसीले बिना समस्याहरू सम्हाल्छ। मेरो मामलामा, यो धेरै समय भैसकेको छ जब म पीसीमा उच्च लागत र म्याकको उच्च लागत र आर्किटेक्चर अनुप्रयोगहरुमा यसको कम प्रदर्शन दिएर माइग्रेट गरेको छु र एन्ड्रोइडमा माइग्रेट गर्न मसँग अर्को सम्भावना छैन, मैले अनुमान गरे कि लिनक्स र गुगलले गरे तपाईंको सेल फोन प्रणालीमा एप्पल भन्दा राम्रो काम।
यसको आधारमा मलाई लाग्छ कि आईफोनले ब्ल्याकबेरीको जस्तै मार्ग अनुसरण गर्दै छ, केवल एक अप्रचलित मेमोरी बन्न!
सेबास्टियन एजुइरेलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंसँग तपाईंको आईफोन memory मेमोरीमा फोहोरमुक्त हुनुपर्दछ, तपाईं मध्ये एक को हो जुन हामी सबैको अपडेटमा जोडिएको जंक फाईलहरू। Iphone4 एक LUXURY उपकरण टेक्नोलोजीको रुपमा बोलेको छ, ip4 भन्दा धेरै राम्रो !! जबकि आईपी for को लागि प्रतीक्षा गर्नेहरूले पहिले नै थाहा पाउनु पर्छ कि यो आईपी than भन्दा बढि बाहेक application बर्षको लागि एक विशिष्ट अनुप्रयोगको साथ यो प्रतिस्पर्धा जानु अघि, अर्को दिन हामी तपाईको आईपी about को बारेमा मात्र कुरा गर्नेछौं केवल बृद्धि भएको वास्तविकता भन्दा बढी गर्न सक्षम, यसको ख्याल राख्नुहोस्, यो अझै मान्य छ!
कसैले मलाई मद्दत गर्दछ ?!
मैले आज मेरो आईफोन s एस अनलाइन खरीद गरें मसँग यो पहिले नै छ र म सामाजिक नेटवर्कहरू डाउनलोड गर्न चाहन्छु र यो मेरो लागि पर्खँदै आउँछ .. र यो कहिले लोड हुँदैन म like जस्तो भयो। त्यस्ता घण्टा तिनीहरू डाउनलोड गर्दैनन् कसैले मलाई दिन्छ। सल्लाह वा यो इन्टरनेट वा म के गर्ने?
Gorr लाई जवाफ दिनुहोस्
एना कारिना टोरेस भन्यो
मसँग आईफोन .5.5..XNUMX छ र म स्क्रिनमा के छ वा माथि स्लाइड गर्न सक्दिन। स्क्रीन मात्र स्थिर रहन्छ। मैले के गर्नु पर्छ? धन्यबाद
Ana Carina Torres लाई जवाफ दिनुहोस्
ट्यूटोरियल: आईफोन ss मा स्लो मोशन भिडियोहरू कसरी निर्यात गर्ने
आईओएस7का अक्षरहरू कसरी परिवर्तन गर्ने